China EEC L2e Electric Cabin Car -X2 abavelisi kunye nabanikezeli |Yunlong
I-EEC 3 ye-Wheel Electric Cabin Car
I-EEC 4 ye-Wheel Electric Cabin Car
EEC L3e Isithuthuthu soMbane
EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeMoto -X5
I-EEC L2e Imoto yeKhabhinethi yoMbane -Y1
EEC L6e Imoto yoMbane yoMbane ...
I-EEC L2e Imoto yeKhabhinethi yoMbane -X2
Ifilosofi yokuSebenza: Iimoto ze-Yunlong ze-E, Yenza uBomi bakho be-Eco!
Indawo: Ukuqhuba umgama omfutshane kunye nokuhamba yonke imihla.Ikunika inketho yezothutho eguquguqukayo enokuthi ijikeleze, yenza ubomi bakho bemihla ngemihla bube lula kakhulu.
Ubunakho bokubonelela:I-1000 yeeyunithi / ngenyanga
Imigaqo yokuhanjiswa:iintsuku 20-40 emva kokufumana idiphozithi
Iyalayisha:Iiyunithi ezi-4 ze-1 * 20'GP, iiyunithi ezili-10 ze-1 * 40HQ
1. Ibhetri:I-60V58AH ibhetri ye-Lead-Acid, ibhetri enkulu, i-80km yokunyamezela i-mileage, kulula ukuhamba.
2, iMoto:I-1500W i-high-speed motor, i-back-wheel drive, umzobo kumgaqo wesantya sokuhlukana kweemoto, isantya esiphezulu sinokufikelela kwi-45km / h, amandla anamandla kunye ne-torque enkulu, iphucule kakhulu ukusebenza kokunyuka.
3. Inkqubo yeBrake:Iziqhoboshi ezine zeDiskhi zamavili kunye nesitshixo sokhuseleko ziqinisekisa ukuba imoto ayiyi kutyibilika.Ukufunxa ukothuka kweHydraulic kuhluza kakhulu imingxuma .Ukufunxa ukothuka okuqinileyo kulula ukuziqhelanisa namacandelo eendlela ezahlukeneyo.
4, izibane ze-LED:Inkqubo yokulawula ukukhanya okupheleleyo kunye nezibane ze-LED, zixhotyiswe ngezibonakaliso zokujika, izibane ze-brake kunye nezibuko ezibonisa ngasemva, zikhuselekile ngakumbi ekuhambeni ebusuku, ukukhanya okuphezulu, ukukhanya okude, kuhle kakhulu, ukonga amandla kunye nokonga amandla.
5. Dashboard:Ideshibhodi enenkcazo ephezulu, ukukhanya okuthambileyo kunye nokusebenza okunamandla okuchasana nokuphazamiseka.Kulula ukubona ulwazi olufana nesantya kunye namandla, qinisekisa inkqubela phambili egudileyo yokuqhuba.
6. Amatayara:Ukujiya kunye nokwandisa amatayara e-vacuum kwandisa ukukhuhlana kunye nokubamba, ukuqinisa kakhulu ukhuseleko kunye nokuzinza.
7. Isigqubuthelo sePlastiki:Ingaphakathi kunye nomphandle wemoto yonke yenziwe nge-ABS ephezulu kunye ne-high-high-high-high quality ye-ABS kunye neeplastiki zobunjineli, ezikhusela indalo, zikhuselekile kwaye ziqinile.
8, Isihlalo:Isikhumba sithambile kwaye sikhululekile, i-angle ye-backrest iyahlengahlengiswa, kunye noyilo lwe-ergonomic lwenza isihlalo sikhululeke ngakumbi.
9, Ngaphakathi:Ingaphakathi elitofotofo, xhobisa ngemultimedia,, iheater kunye nesitshixo esiphakathi, ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo.
10, Iingcango＆IiWindows:Iingcango zombane zenqanaba lemoto kunye neefestile kunye nepanoramic sunroof zikhululekile kwaye zilungele, ukwandisa ukhuseleko kunye nokutywinwa kwemoto.
11I-3C eqinisekisiweyo yeglasi epholileyo kunye ne-laminated · Phucula umphumo wokubonakalayo kunye nokusebenza kokhuseleko.
12.Izinto ezininzi:Ixhotyiswe ngeMP3 kunye nemifanekiso yokubuyisela umva, esebenziseka ngakumbi kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-13, i-Aluminiyam yamavili Hub:Ukutshatyalaliswa kobushushu okukhawulezayo, ubunzima obulula, amandla aphezulu, akukho deformation, ikhuselekile ngakumbi.
14, Isakhelo kunye neChassis:I-GB Standard Steel, umphezulu ophantsi kwe-pickling&Photostatting kunye nonyango olumelana nomhlwa ukuqinisekisa eyona ngqiqo ibalaseleyo yokuqhuba ngokumileyo kunye nokuqina.
IiMveliso zobuGcisa Specs
I-EEC L2e IiNgcaciso eziMgangatho zoBuchule boBuchule
Isiseko sevili (mm)
UCwangciso oluncinci loMhlaba (mm)
Ibar yeHandle ephakathi
60V/58Ah Lead-Acid ibhetri
Itshaja yemoto 60V 5A
Ngaphambili: 135/70-R12 Ngasemva: 135/70-R12
I-Aluminiyam ye-Alloy Hub
MP3+Ikhamera yokujonga ngasemva+ibluetooth
Kubandakanywa (Ngaphambili nangasemva)
Iyasongeka, enezibane zesalathisi
Ngaphambili: I-EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeCar-Y4
Okulandelayo: I-EEC L6e Imoto yoMbane yoMbane Y2-C
Gxininisa ekuboneleleni ngezisombululo zemong pu iminyaka emi-5.
I-EEC L2e Imoto yeKhabhinethi yoMbane -Y3
Ibhayisekile yoMbane ye-EEC L1e
I-EEC L6e Ikhabhinethi yoMbane yeCar-Y4
I-EEC L6e Imoto yoMbane yoMbane Y2-C
I-EEC L7e Imoto yoMbane yoMbane Y2-P